Taorian'ny fananganana tranonkala 5,000 mihoatra ny taona maro dia nanontaniana imbetsaka aho hoe "Ahoana no hanombohako ny orinasan-tserasera?"
Ity boky ity no valinteniko amin'ity fanontaniana ity!
Tokony hanaraka ny "Dingana IREO" izay aseho ato amin'ity boky ity, araka ny baiko omena azy ireo, na te-hanangana tranokala eCommerce na maro, dia mitovy ny dingana. Nampidirina rohy ho an'ireo fitaovana ampiasaiko isan'andro koa aho mba hananganana tranokala maro be.
Raha tafiditra ao aminay ianao "Mponina maimaim-poana" ianao koa dia mahazo ny dikan-dikan-teny fampahalalàn'ity eBook ity maimaim-poana sy fampitandremana hafa momba ny eBooks hafa sy ny fampiofanana video navoakanay.
Mba hamakiana ireo "dingana rehetra" amin'ny ONLINE! SOSO-KEVITRA Miangavy anao hiara-hiasa aminay Free Lifetime Membership - ianao koa hahazo loharanom-bary maimaim-poana Training, Videos, eBooks ary fanavaozana;
Mipetraka àry ianao mieritreritra hoe 'te hanao ny vola online '- aiza no hanombohako eto an-tany!
Manana dite na kafe ary hahita toerana any
mangina mba hamaky amin'ny ...,
Hi, Carl Henry aho, niasa tao an-trano aho, nanangana orinasa maromaro tao amin'ny orinasa 39 samihafa, satria i 1978 sy izaho dia nahazo ny vola online hatramin'ny 1998. Nipetraka tany Monaco sy tany manodidina aho hatramin'ny taona 2000.
Ny tanjon'ity ebook ity dia ny hanome anao ny fampahalalana ilainao amin'ny fotoana fohy indrindra, miaraka amin'ny kely indrindra amin'ny teny maro mba hahafahanao manomboka manao fihetsika avy hatrany.
Amin'ny teny hafa dia tiako homena anao "kalitao tsy isa ".
Ity fampahalalana ity dia mifantoka amin'ny fananganana online business system tranonkala avy amin'ny hevitra voalohany amin'ny fananana tranonkala navoaka. Raha efa manana vohikala ianao, ity eBook ity dia mbola afaka manampy anao raha te hanomboka na hanangana ny fidiranao an-tserasera ianao ary ny tranonkalanao dia manao asa betsaka kokoa ho an'ny orinasa na orinasa misy anao.
Ny dingana rehetra momba ny fanombohana orinasa an-tserasera dia rakotra. Na dia nohazavaina fotsiny ny lohahevitra sasantsasany amin'ny lohahevitra aza satria mitaky ny zavatra vita an-tsoratry ny tenany manokana mba hahalalan'izy ireo tanteraka azy ireo. Ny vaovao tsara dia efa navoakako na dia efa namoaka eBooks antsipirihany momba ireo lohahevitra ireo aza aho na hamoaka bokim-boky vaovao vetivety - midira ato aminay "Mponina maimaim-poana" mba ho mailo amin'ny famoahana vaovao sy ny lahatsary maimaim-poana.
Nahoana aho no manome fampahalalana sy fampiofanana?
Eny tokoa, tsy manome ny zava-drehetra aho satria ity boky ity sy vaovao hafa dia mivarotra amin'ny tranokalako sy ireo sehatra hafa tahaka an'i Amazona, na dia te hanorina fifandraisana miaraka amin'ny olona maro araka izay tratra aza aho dia manolotra izany malalaka izany ho an'ny mpikambana ary ny mpiblan'ny newsletter nandritra ny fotoana voafetra.
Raha toa ka tsy dia misy manelingelina ny olona dia te hampiseho ny fitiavako sy ny fahalalako mialoha aho mba hahafantaranao fa raha mividy zavatra avy amiko ianao amin'ny hoavy dia hanana kalitao avo lenta ary hiasa ho anao izany.
Raha ankafizinao io boky io ary mahita fa ilaina dia afaka manao fanomezana ianao na mividy dika mitovy amin'ny ho avy.
Rehefa nanomboka ny varotra an-tserasera tao amin'ny 1998 ny zava-drehetra dia vaovao ary tsy nisy olona nahafantatra ny zavatra nataon'izy ireo, nisy fanampiana kely na fampiofanana azony saingy mora kokoa izany tamin'izany andro izany noho ny tsy fahampian'ny fifaninanana - amin'izao fotoana izao dia betsaka ny vaovao any Mavesatra izany!
Nanapa-kevitra ny hamorona fiofanana sy fampahalalam-baovao aho izay 'mamotika' ny angona rehetra aty anaty aterineto ho toy ny tari-dàlana fohy sy tohatra, tahaka ny zavatra rehetra eto amin'ity izao tontolo izao ity dia misy fomba haingana sy tsotra kokoa hanaovana zavatra.
Mampanantena aho fa hitazona zavatra fohy araka izay tratra ary hitarika anao amin'ny lalana marina miaraka amin'ny "dingana atao" ataonao mba hahafahanao mamoronafanamoriana maimaim-poana an-tserasera amin'ny tranonkala efa misy, na, mamorona iray vaovao Izany dia araka izay azo atao.
Ny anjaranao dia ny manao zavatra araka ny torohevitro, aza kivy ary aza mieritreritra izany - Maharitra! Makà Action! Manomboka kely ary manitatra mifanaraka amin'ny zavatra takinao sy ny toetranao manokana.
OK! Lasa izao! Ankoatra ny fampidirana ankapobeny amin'ny tontolon'ny aterineto sy ny fiheveran'ny tsirairay manokana dia mila mampiditra maromaro aho dingana Manoro hevitra anao aho mba haka ny tenanao an-tserasera. Misy sora-pandrinihana sivy lehibe ary raha miasa amin'ny alalàn'izy ireo ianao amin'ny fanaovana fihetsiketsehana tsirairay dia hapetraka ao anaty aterineto ianao ary naka ny dingana voalohany mba hahafahana mampiasa Internet ho fitaovana vaovao izay hanampy anao hahomby.
Ireto ny dingana lehibe amin'ny ONLINE! FANAMPIANA Ny fototra Azonao atao ny manindry ny rohy etsy ambany na download ny eBook manontolo eto ambany;
Ny Foundation - "Ny fivarotana varotra"
Ny dingana Action 1 - Fidio ny loha-hevitra
Dingana Dingana 4 - Manomeza Fanomezana
Dingana Dingana 9 - Mianary anarana nomena anarana & Hosting
Famaranana sy Fanavaozana
Mba hamakiana ireo "dingana rehetra" amin'ny ONLINE! SOSO-KEVITRA Miangavy anao hiara-miasa aminay izahay
Hahazo loharano maimaim-poana bebe kokoa ianao, Training, Video, eBooks ary fanavaozana;
Tsindrio eto raha hamaky ny dingana manaraka dingana -Member Only :-)
Download ny eBook manontolo ** Free ** Ankehitriny!
Ampidiro fotsiny ny antsipiriany etsy ambany